“Toddobo Hoggaamiye oo qol isku xirtay oo saacado fadhiyay laga qurxoon in ay taladu ku koobnaato” – Kalfadhi
July 23, 2020 Hassan Istiila
Waxaa fiicnaan lahayd in Hoggaamiyayaasha ku wadahadlaya Dhuusa Marreeb ay talo kala dhaxeyso wufuudda faraha badan ee la socota ee qaar khubaro yahay.
Runtii maskax, aqoon iyo waayo aragnimo ayaa ku kulantay marka la isu geeyo wufuudda la socota Madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha iyo Shanta Madaxweyne Dowlad Goboleed.
Waxaa ila habbooneyd in Hoggaamiyayaashu ay ahaadaan kuwa ay taladu ka go’do ee aanay noqon kuwa ay ka billaabato kuna dhammaato.
Dhaqankaas oo caan ahaa sagaashameeyadii waxaan moodayay in ay siyaasadda Soomaalidu ka kortay.
Waxaa ila qummaneyd in Mas’uul kasta ay wadahadalka ku wehliyaan Wasiir ama laba ka mid ah wafdigiisa. Toddobo Hoggaamiye oo qol isku xirtay oo saacado fadhiyay laga qurxoon in ay taladu ku koobnaato.
W/Q: Ambassador Yusuf Garaad Cumar.